ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကမ္ဘာအနှံ့ခရီးဆန့်ပြီ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on October 25, 2011 at 4:45pm
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် ကမ္ဘာတစ်လွှားသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန့်ပွားလာသည်နှင့်အမျှ ဗုဒ္ဓစာပေများ၊ ရဟန်းတော်များ ကိုလည်း နိုင်ငံတကာတွင် တွေ့မြင်လာကြရသည်။ မကြာ သေးမီအချိန်က ဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်မွေတော်များ ကမ္ဘာတစ် ခွင်သို့ လှည့်လည်ကြွချီသည့် သတင်းများကို ကမ္ဘာ့သတင်း စာများ၌ ဖတ်ရှုရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်မွေတော် များအကြောင်း ကမ္ဘာ့သတင်းစာတို့၌ ဖော်ပြထားပုံအချို့ ကိုထုတ်နုတ်၍ ဖော်ပြလိုပါသည်။
ရှေးဦးစွာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ထုတ်ဝေသည့် ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာ ၌ အမေရိကန်ပြည်နယ် အချို့တွင် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို ပြ သထားမည့်အကြောင်း သတင်းထောက် ဘီလ်ဗရုတ်ဒ်ဝေး ရေးသားပုံမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်-
ယခုနှစ် ဆောင်းဦးပေါက်ရာသီတွင် ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများ၌ပါဝင်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တည်ထောင်ခဲ့သူ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅ဝဝ-ကျော် အချိန်က ဓာတ်တော်များကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖူးမြော်ခွင့်
အခြားများစွာသော ဘာသာတရားဆိုင်ရာ သူတော်စင်တို့၏ အရိုးများနှင့်မတူဘဲ ဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်များတွင် ပုလဲလုံးကဲ့သို့သော ဓာတ်တော်များပါဝင်သည်။ ပုံဆောင်ခဲ အသွင်ရှိသော အဆိုပါဓာတ်တော်များသည် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ် များကို မီးသင်္ဂြိုဟ်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နှလုံးသား၊ပန်းပွင့်၊ ခရုသင်းနှင့် အခြား ပုံသဏ္ဍာန်များအသွင် ကျန်ရစ်သည်ဟုဆိုသည်။
(မြတ်စွာဘုရား၏ အလောင်းတော်ကို မီးရှို့သောအခါ အသား၊ အရေ၊ အကြော၊ အစေးတို့သည် ပြာမဖြစ်၊ မှိုင်းမဖြစ်ဘဲ၊ သရီရဓါတ်တော်ဖြစ်သွားသည်။ (ဒီ-မြန်၊၂၊၁၅၇။)
ဓါတ်တော်များသည် မြတ်လေးပန်း၊ သန့်စင်သည့် ပုလဲ၊ ရွှေအဆင်းသဏ္ဍာန်ရှိသည်။ စွယ်တော် လေးဆူ၊ ညှပ်ရိုးတော် နှစ်ဆူ၊ ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်တော် စုစုပေါင်း(၇)ဆူမှာ ပကတိအတိုင်း ကျန်ရစ်ပြီး၊ ကျန်ကိုယ်ခန္ဓာ အင်္ဂါအစိပ်အပိုင်းများမှာ အငယ်ဆုံး မုန့်ညှင်းစေ့၊ အကြီး ဆန်ကျိုး၊ အကြီးဆုံး ပဲနောက်စေ့ကျိုးခန့် ပမာဏရှိသော ဓါတ်တော်များ ဖြစ်သွားသည်။)
ဓါတ်တော်အဖြစ် တည်ရှိခြင်းမှာ ထိုဘုရား ရဟန္တာ သူတော်စင်များ၏ ကိလေသာ (စိတ်အညစ်အကြေး)မှ အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်မှုကို ပေါ်လွင်စေသည်ဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ယုံကြည်ကြသည်။
သကျမုနိဗုဒ္ဓဟုလည်း ခေါ်တွင်သည့် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ အရိုး အပိုင်းအစဓါတ်တော်များ၊ ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်းသဖွယ် သွေးသား အစိုင်အခွ ဓါတ်တော်များနှင့် အခြား ရဟန္တာ သူတော်စင်များ၏ ဓါတ်တော်များကို ဝါရှင်တန်မြို့၊ ဂီအက်ဟိုအန်
တိဗက်ဘုရားကျောင်း၌ ပြသထားသည်။ ရှေ့လတွင် အဆို ပါ ဓာတ်တော်များကို မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြယ်နယ် ချာ လိုတီ(Charlotte)မြို့၊ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အတ္တလန္တာမြို့၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် အိုလန်ဒိုမြို့နှင့် တက္ကဆပ်စ်ပြည်နယ်
ဒါးလက်စ်မြို့တို့၌ ခင်းကျင်း ပြသထားမည်ဟု သိရသည်။
ဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်များ စစ်မှန်ကြောင်း အာမခံပါသ လားဟု မေးမြန်းကြည့်သောအခါ မန်ချက်ချူးဆပ်စ် နည်း ပညာတက္ကသိုလ် (M.I.T)မှ ဧည့်ပညာရှင်လည်းဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာ သာ ရဟန်းတော်လည်းဖြစ်သူ တင်ဇန်ပိယဒဿီ သုခလ ပုဂ္ဂိုလ်က'ဒါဟာမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းပါပဲ' ဟုဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သော (စက်တင်ဘာ)လက တိဗက်ဘာသာရေး ခေါင်း ဆောင် ဒလိုင်းလားမား အမေရိကသို့လည်ပတ်ချိန် အ တွင်း ဓာတ်တော်များကို ထိုတက္ကသိုလ်၌ ပြသခဲ့ဖူးသည်။
ဓာတ်တော်ကြုတ်ကို ကြည့်ရှုလာသူများ၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင်ထားလျက် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးသူ သုခလ ရဟန်းတော်က မိမိအနေဖြင့် အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း မိတ္တေယျ စီမံကိန်း(Maitreya Project)မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့် ဟဒယ စေတိယ ဓာတ်တော်များ လှည့်လည်ပြသပွဲ (Heart Shrine Relics Tour Exhibit)တွင် ပါရှိသည့် (ဓာတ်တော်) ပစ္စည်း များ၏ စစ်မှန်မှုကို မေးမြန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ တည်ရှိဆဲဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနှင့် နီပေါနိုင်ငံများ၌ စေတီတော်များတည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ သုခလရဟန်းတော်က ယခု ပြသထားသည့် ဓာတ်တော်များမှာ သကျမုနိဗုဒ္ဓ၏ ဓာတ်တော်အစစ်အမှန်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များမှာ အခြားနေရာအားလုံးတွင်တွေ့ရသည့် ဓာတ်တော်များနှင့် သွင်ပြင်တူညီကြောင်း ဆိုသည်။
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ဘုရားကျောင်းများ၌ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ ရှိကြပြီး အထူးနေ့ရက်များ၌သာ ယင်းဓာတ်တော်များကို အများပြည်သူ ရှုမြင်နိုင်အောင် ပြသကြသည်။ သို့ရာတွင် ဓာတ်တော်များကို လှည့်လည်ပြသမှုမှာ ရှားပါးသည်သာ မက ဓာတ်တော်အများအပြားကို ယခုဓာတ်တော်များကဲ့သို့ လှည့်လည်ပြသခြင်း လုံးဝမရှိခဲ့ဖူးဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ဓာတ်တော်များကို ဖူးမြော်ရခြင်းသည် မင်္ဂလာရှိပါ ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓသက်တော်ထင်ရှား မရှိတော့သဖြင့် ယင်း ဓာတ်တော်များမှာ သက်တော်ထင်ရှား မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ပမာတူ ကြောင်းလည်း အဆိုပါ ရဟန်းတော်ကဆိုသည်။
ဝေးစ်လေယန်တက္ကသိုလ်မှ လူသိများသည့် ပါမောက္ခ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တိဗက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူ ပညာရှင် ဂျန် ဝီးလစ်စ် (Jan Willis)က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မ ဟုတ်သူများအနေဖြင့် ရုပ်လောကကို ကျော်လွန်ခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ဟောကြားသည့် ဘာသာတရားသည် ဓာတ် တော်များကို အလေးဂရုပြုခြင်းအတွက် အံ့သြဖွယ် တစ်ရပ်ဖြစ်သွားနိုင်သည်၊ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များသည် ဘုရားခန်းများ သို့မဟုတ် အခြားအလေးပြုရာနေရာများ၌ ကိန်းဝပ်ပါက အရိုအသေပြုခံရသည့်နေရာ ဖြစ်သွားပြီး ယင်းသည် ကြည်ညိုသူတစ်ယောက်အဖို့ အသက်ရှိစဉ်က ကိုယ်တိုင်လည်း သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရရှိခဲ့သည်သာမက
အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်း အသိဉာဏ်ပွင့်လန်းအောင် ကူညီခဲ့သော ဆရာအရှင်(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ)အား ပိုမိုနီးကပ်စွာ သိမြင် ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ဝီးလစ်စ်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ လူဦးရေ ၂၇၈ သန်း(၂ဝဝ၁)ရှိပြီး အွန်လိုင်းသတင်းတစ်ခု၌ဖော်ပြသည့် ၂ဝဝဝ-ပြည့်နှစ် ဇယားအရ ခရစ်ယန် ၇၈-ရာနှုန်း၊ ဘာသာမဲ့ ၁၃-ရာနှုန်း၊ ဖန်ဆင်းရှင်မဲ့ ၂-ရာ နှုန်း၊ ဂျူး ၁-ရာနှုန်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝ.၅-ရာနှုန်း၊ မူဆလင် ဝ.၅-ရာနှုန်း ရှိသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်မဲ့(ဖန်းဆင်းရှင်ကိုမယုံသူ) ၂-ရာနှုန်းအနက် သုံး ပုံနှစ်ပုံလောက်မှာ ဗုဒ္ဓတရားကိုလိုက်နာသူ သို့မဟုတ် ယုံ ကြည် စိတ်ဝင်စားသူများ ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
ယခုနှစ် (ခရစ် ၂ဝဝ၃)၊ ဇွန်လတုန်းကလည်း တောင် အမေရိကတိုက် အနောက်စွန်းရှိ ချီလီနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓဓာတ် တော်များ ကြွရောက်ခဲ့သည်။ ချီလီနိုင်ငံတွင် ရိုမန်ကက် သိုလစ် ၈၉-ရာနှုန်း၊ ပရိုတက်စတင့် ၁၁-ရာနှုန်း ရှိသည်။ ချီလီနိုင်ငံသားတို့ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ ခံစား ချက်ကို ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ် (ဇွန်လ ၂၈၊ ၂ဝဝ၃) ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရသည်-
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အဖြစ် ကက်သိုလစ် ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် အများစုနေထိုင်ရာ ချီလီနိုင်ငံသို့ ပင့်ဆောင်လာခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်များ ကိုဖူးမြော်ရန် ချီလီနိုင်ငံသား ရာပေါင်းများစွာတို့ တန်းစီ လျက်ရှိကြသည်။ ရဲနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ လိုက်ပါစောင့် ကြပ်လျက် ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များသည် ရွှေကြုတ် တော်ကြီးတွင် ထည့်သွင်းအပူဇော်ခံထားသော သက်တမ်း နှစ် ၂၅ဝဝ ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို ချီလီနိုင်ငံ၊ ဆန်တီယာဂိုမြို့တော် ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကြီး အတွင်းရှိ ခမ်းနားစွာ တန်ဆာဆင်ထားသည့် စင်မြင့်ပေါ် သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် တရား ဓမ္မများရွတ်ဆိုပြီး အမွှေးနံ့သာများ ပက်ဖျန်းကြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ချီလီတွင်လူနည်းစု ဖြစ်သော် လည်း ဤဖန်ပေါင်းချောင်အတွင်းမှ ရွှေခွက်ငယ်အပြည့်ရှိ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို အုန်းအုန်း ကျွက်ကျွက် လာရောက် ဖူး မြော်ကြသည်မှာ အံအားသင့်စရာကောင်းကြောင်း ရိုက် တာသတင်းထောက်က ရေးသားသည်။
''ဒါဟာ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ရတောင့်ရခဲ အခွင့် အရေးပဲ။ ကက်သိုလစ် ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်များ ဂျေရူး ဆလမ်းမြို့သို့ သွားကြသလိုပေါ့''ဟု ချီလီလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး အရှင်လူးဝစ်ဖလောရက်စ် (Luis Flores)က သတင်းထောက်အား ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာ နှင့် ယိုးဒယားနိုင်ငံတို့က ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂသို့ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတစ်ခုအဖြစ် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့လည်း တရားဝင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သွားသည်။
သမိုင်းတွင် ထင်ရှားခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် သို့မဟုတ် သိဒ္ဓတ္ထ ဂေါတမဗုဒ္ဓကို ယခုအခေါ် နီပေါနိုင်ငံတွင် မင်းမျိုးမင်းနွယ်မှ ဘီစီ ၅၆၃ (ထေရဝါဒနိုင်ငံတို့အလို ဘီစီ ၆၂၃)တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ဗုဒ္ဓ
သည် အသက် ၃၅-နှစ်တွင် ဗောဓိÓဏ်ကိုရရှိခဲ့ပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံး တရားဓမ္မများ ဟောကြားလျက် သက် တော် ၈ဝ-တွင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
တင်းကြပ်သည့် အစောင့်အကြပ်များဖြင့် ၁၅-နိုင်ငံမျှ ဒေသစရီ ကြွချီခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ဓာတ်တော်များသည် နောက် နှစ် (၂ဝဝ၄-နှစ်) မေလမှစတင်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူး ယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ အမြဲတမ်း ကိန်းဝပ် စံပယ်မည်ဖြစ်သည်။
တိဗက်လူမျိုး ရောဂါကုသသူ လားမားဘုန်းကြီး ဂန်ချင် ရင်ပိုချီ (Gangchen Rinpoche)က ဤဓာတ်တော်များ ကို တိဗက်ရှိမိမိကျောင်းသို့ ရေရရှိရေးအတွက် ကူညီပေး ခဲ့သည့် အင်ဂျင်နီယာအုပ်စုတစ်စုအပါအဝင် မိမိမိတ်ဆွေ များ၏စေတနာကို တုံ့ပြန်ရန် ချီလီနိုင်ငံသို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
'ဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်များ ချီလီသိြု့<ွကရောက်ခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အားလုံးအတွက် ဖွင့် ထားကြောင်း၊ အကြောင်းမူ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က လူသား အား လုံးကို ပွင့်လင်းစွာ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ်တော်များ သည် အကြမ်းမဖက်မှုကို တည်ဆောက်ရန် အထောက် အပံ့ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း' အဆိုပါ လားမားဘုန်းတော် ကြီးက ရိုက်တာသို့ မိန့်ကြားသည်။
ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို ဖူးမြော်ရန် စင်မြင့်ပေါ်သို့ ပထမဆုံး ရောက်လာသူများမှာ ရဲအရာရှိများဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကမူ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ ယခုအပတ် ဆန်တီယာဂိုမြို့တော်သို့ ရောက်ရှိချိန်မှစ၍ အံ့ဖွယ် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
'ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ မြို့တော်သို့ရောက်ရှိသည့် တိုတောင်းသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဗုဒ္ဓအကြောင်း မသိဖူး ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် လုံးဝပြောင်းလဲမှုများကို တွေ့ရ ကြောင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီစောင့်ရှောက်သည့် လုံခြုံရေးတာဝန်ခံများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့တည်းခိုနေသည့် ဟိုတယ်မှ ဝန်ထမ်းများ၏ တုံ့ပြန်မှုမှာလည်း အံ့သြစရာပင် ဖြစ်ကြောင်း' ပြပွဲဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ်သူ ဟေဒီဒက်ဝစ် လာ (Heidy Dettwiler)က ရိုက်တာသို့ ပြောကြားသည်။
ချီလီနိုင်ငံ၊ ဆန်တီယာဂိုမြို့၌ ပြသခဲ့သည့် ဓာတ်တော်
များကိုပင် အာဖရိကိုက် အရှေ့ဖျားရှိ ကင်ညာနိုင်ငံသို့ ပင့် ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေးလီးနေးရှင်းသတင်းစာ (ဇူလိုင်၃၁၊ ၂ဝဝ၃)၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ၌ ပရိုတက် စတင့် ၃၈-ရာနှုန်း၊ ကက်သိုလစ် ၂၈-ရာနှုန်းနှင့် မူဆလင် ၇-ရာနှုန်းနေထိုင်သည်။ ယင်းသတင်းစာ ဖော်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ ထည့်ထားသည့် ဓာတ်တော်ကြုတ် ကို ရှေ့တစ်ပတ်တွင် ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီမြို့၌ ပြသမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းဓာတ်တော်များကို နိုင်ရူဘီမြို့ လိုရေရှိုရိန့်ဂ်ျ လမ်းရှိ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတစ်ခု၌ ဗုဒ္ဓမွေးနေ့၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရသည့်နေ့နှင့် ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေ့ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုသည့် ဝိဆက်ဒေးကာလအတွင်း ခင်းကျင်းပြသ ထားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအခမ်းအနားမှာ အာဖရိကတိုက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသည် ၁၉၉၉-ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂတွင် ကမ္ဘာ့ အရေးပါသည့်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော ဝိဆက်ဒေးကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အထိမ်းအမှတ်လည်း ဖြစ်သည်။ ၇၉-ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံ၌ ဝိဆက်ဒေးကို ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်နှင့် ၄င်း၏ အခြားရုံးများ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက လက်ခံအသိအမှတ် ပြုသည့်နေ့ရက်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်အတည်ပြု ပြဋ္ဌန်းခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို ထည့်သွင်းထိန်းသိမ်းထားသည့် ဓာတ်တော်ကြုတ်ကို စောင့်ရှောင့်သူ ဥပသကာ ဆီအန်ဆာ အေခန့်သည် ၂ဝဝ၁-ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကတည်းက ကမ္ဘာ တစ်လွှားသို့ ခရီးလှည့်လည်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၄င်း၏ခရီး စဉ်မှာ ၂ဝဝ၄-ခုနှစ်၊ ဝိဆက်ဒေးတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဌာန ချုပ်၌ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဓာတ်တော်များကို ယင်း ဌာနချုပ်တွင် အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ရူဘီမြို့၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်သူ ထေရဝါဒရဟန်းတော် အရှင်အရိယဝံသ အဆိုအရ ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များနှင့် အတူ မစ္စတာဆာအေခန့် ရောက်ရှိလာခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ ဘဝတစ်သက်တာတွင် တစ်ကြိမ်သာ ဗုဒ္ဓ ဓာတ်တော်များကို နီးကပ်စွာဖူးမြော်ခွင့်ရသည့် အခွင့်အ လမ်းဖြစ်သဖြင့် အလွန်အရေးပါသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာနှင့် နီပေါလို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများ၌ လူအများသည် ဓာတ်တော်များကို ဖူးမြော်ရန် နေ့ပေါင်းများစွာ တန်းစီရ ကြောင်း၊ ဓာတ်တော်များမှာ ဗုဒ္ဓဝါဒ၌ အထူးဟောကြားချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း အရှင်အရိယဝံသကဆိုသည်။
ဒီဃနိကာယ် မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်တော်နိဂုံး၌ ဗုဒ္ဓ ဓာတ်တော်မွေတော်များ၏ ဂုဏ်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေး ခေတ်သီဟိုဠ်မထေရ်ကြီးများက အောက်ပါအတိုင်း မှတ် ချက်ပြုခဲ့ကြသည် -
'ထိုသရီရဓာတ်တော်၏ တန်ခိုးကြောင့်ပင်လျှင် ဤမဟာပထဝီမြေပြင်သည် မြတ်သောဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲ တို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသကဲ့သို့ တင့်တယ်ပေ၏။ ဤ သို့လျှင် မြတ်စွာဘုရား၏ ဤသရီရဓာတ်တော်ကို မြတ် ထက်မြတ်ဖြစ်သော နတ်လူတို့သည် ကောင်းစွာအရို အသေပြုကြကုန်၏။
(အကြင်)သရီရဓာတ်တော်ကို နတ်မင်း နဂါးမင်း လူမင်းတို့သည် ပူဇော်ကြလေပြီ၊ ထိုအတူပင် မင်းထက် မင်းမြတ်တို့သည်လည်း ပူဇော်ကြလေပြီ၊ ထို(သရီရ ဓာတ်တော်)ကို ရရှိလတ်သော် လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးကြ ကုန်လော့၊ မြတ်စွာဘုရားဟူသည် ကမ္ဘာအရာတို့ဖြင့် သော်လည်း စင်စစ် တွေ့ရခဲ၏'
(ဒီ-မြန် ၂၊ ၁၆ဝ)။
သက်တမ်းတိုသည့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ဓာတ်တော် မွေတော်များ ကျန်ရစ်ရိုးထုံးစံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓာတ်တော်မွေတော်များမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ထားပစ်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓကိုယ်စား အရိုအသေပြုရ မည့်အရာဖြစ်သည်။ 'အသက်ထင်ရှား မြတ်ဘုရား၌ ဖြစ် စေ၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံ ဘုရားရှင်၌ဖြစ်စေ၊ စိတ်ထားညီမျှသော် အကျိုးပေးတူ၏။ စိတ်ထားကောင်းခြင်းကြောင့် သတ္တဝါတို့ ဘဝကောင်းသို့ ရောက်ကြရသည်'။
ဓာတော်မွေတော်များကို ဖူးတွေ့လိုက်ရသည့်ခဏ၌ စိတ်အစဉ်သည် ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့၍ သွားနိုင်မည်ဆိုလျှင် ယင်းကြည်လင်သည့် စိတ်ထားသည် မည်သည့်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူအားမဆို တစ်ကိုယ်ရေငြိမ်းချမ်းမှု ပေးပါလိမ့် မည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတ်တော်မွေတော်များ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် သို့ ကြွချီခြင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းသည့် လူ့ဘောင်တစ်ရပ်၏ သင်္ကေတ ဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသတည်း။
1. Reuters, June, 28, 2003.
2. Daily Nation, July, 31 2003.
3. The Washington Post, Oct, 25,2003
Ashin Kelasa, U.S.A.